Madaxweynaha puntland matagi doonaa Muqdisho? – Banaadir Times
Musalsalka Af Somali Maria&Mustafa Qeybtii.7aad
Sharaxaad:-Sidee uu u dhacay weerarkii Al Shabaab ku dileen sarkaal ka tirsan CID-da Maraykanka?
Askar Keenyan ah oo lagu waayay weerar Al Shabaab ku qaadeen gobolka Garissa
By banaadir 21st March 2020 32
Golaha wasiiradda Puntland ayaa beeniyay in safarka madaxweyne Deni uu ku tagayo magaalada Muqdisho uu yahay mid uu wada hadal kulasoo galayo dowladda federalka Soomaaliya.
Wasiirka, wuxuu sidoo kale iska fogeeyeen eedeymo ay usoo jeediyeen masuuliyiinta dowladda federalka ee ka qeyb galay shirka wadatshiga, kuwaas oo tilmaamay in warmurtiyeedka kasoo baxay shirka Garowe loogu gafay dowladda federalka iyo dowlad goboleedyada qaarkood.
Waxa uu ku dhaliilay Dowladda Faderaalka Soomaaliya in ciidankii Amaanka ay u deegsanayso bur burinta Dowlad Goboleedyada dalka isaga oo tusaale u soo qaatay deegaanada Maamulka Jubaland ee Koofurta Soomaaliya.
Wuxuu sheegay war murtiyeedkii kasoo baxay shirkii wadashatiga in uu ahaa war murtiyeed ay ku midaysnaayeen 1,800 ergo oo ka koobnaa qeybaha kala duwan ee Puntland.
By banaadir 18th March 2020